The 8 Best Ime Ime Pillows maka Ezigbo 2020ra 2020 - Ezinụlọ
8 nke Pillow kachasị mma maka ime ụra abalị, dị ka ezigbo ndị nne
N'agbata obi mgbawa, njem gaa ime ụlọ ịwụ na ichegbu onwe gị mgbe niile (n'elu oche ụgbọ ala, ụgwọ nlekọta ụbọchị, anaghị ehi ụra-buru ihe ịchọrọ), ịnweta anya abalị dị mma bụ nke kachasị na unicorns ime. Ma, otu ihe nwere ike inyere aka? Ohiri isi emere iji kwado ahụ gị na-eto eto. N'ebe a, asatọ ohiri isi kachasị mma iji nyere gị aka ihi ụra dị ka nwatakịrị (mgbe ị na-eme nwa).
Njikọ: Enwere Ezigbo Ihe Kacha Mma tora onra na Mgbe ’re Dị Ime
Etu ị ga-esi nweta Ohiri Isi Ime Ime
Nha: Ohiri isi ime na-abịa n'ụdị nha dị iche iche, site na wedges ndị na-adịghị edozi ya na ohiri isi buru ibu nke U na-ekpuchikwa gị. Yabụ, ọ bụrụ na ịkekọrịta ihe ndina ahụ, ịnwere ike ịmachi onye gị na ya na-ehi ụra na nke a, ebe ha nwere ike tufuo ụfọdụ n'ime oghere akwa ahụ bara uru. (Ma ọ bụ emela-ị bụ onye na-eme nwa, ka emechara.)
Udi: Nwanyị ọ bụla nwere afọ ime dị iche iche, gụnyere ebe ha na-ahụ ihe mgbu na ihe mgbu ahụ. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iburu ahụ gị n'uche mgbe ọ na-ahọrọ ịhọrọ ohiri isi afọ ime. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na olu gị afụ ụfụ, mgbe ahụ, ohiri isi enwere ike ibanye n'okpuru isi gị nwere ike inye aka. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọsi ike ibupụ ibu gị, mgbe ahụ, ohiri isi na-akụ afọ gị nwere ike inyere aka. Ohiri isi ime n'afọ ndị ọzọ nwere ike ịkpụkọ n'etiti ikpere gị ma ọ bụ nye nkwado maka azụ gị. Ma buru n'uche na ọ bụrụ na ị na-atụgharị tụgharịa mgbe ị na-ehi ụra, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ ohiri isi nke yiri U ka ị ghara imegharị oge ọ bụla ị biliri iji ụlọ ịsa ahụ (yabụ, oge ọ bụla ọzọ ).
Ihe: A na-eji akwa mkpuchi mee ụfọdụ ohiri isi (nke dị mma maka ndị na-adịkarị ọkụ n'abalị), ebe ndị ọzọ bụ polyester. Otu ihe ọzọ ị ga-eburu n’uche: Ohiri isi kachasị mma nke afọ ime bụ ndị nwere ike ịsacha-ọ bụrụ na ọsụsọ na-agba gị n’abalị ma ọ bụ, ị maara, na-awụfu ice cream na mberede mgbe ị na-ekiri Netflix.
Okpuru ime ime kacha mma maka ụra abalị:
ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama
1. Kachasị Mma gburugburu: Leachco Snoogle Total Isi Ohiri Isi
Onye nọọsụ (na nne ya) edebanyere aha, ohiri isi a dị n'ụdị C nwere akụkụ gbagọrọ agbagọ maka izu ike n'isi gị, etiti dị n'etiti iji kwado azụ gị ma ọ bụ afọ gị na obere obere ngwụcha ụkwụ gị maka ịtọpụ n'etiti ụkwụ gị (si otú a na-akwado úkwù gị) . A na m eji Snoogle ugbu a amaghi m ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na enweghị ya - enwere m nsogbu! Vanessa kwuru, onye bụbu onye na-ehi ụra n'izu iri abụọ na abụọ dị ime. N'iji ihe dị ka sentimita iri isii n'ogologo na sentimita iri abụọ na ise n'obosara, enwere ọtụtụ ụlọ ebe a maka okuku gị na-eto eto Ndị nyocha ahụ dịkwa ka ohiri isi na-adị ime, na-eji ọnọdụ donut (lee akwụkwọ ntuziaka) maka nkwado tummy. Dị na isi awọ, ọdụ na ọdụ.
2. Ezigbo Ergonomic: Tempur-Pedic Isi Isi
Maka fom nke na-akpụzi gị, tụgharịa gaa na ergonomic OG nke ụwa ohiri isi. Ezubere iji meghachi omume na ọdịdị na nrụgide nke ahụ gị na-eto eto, ụfụfụ ebe nchekwa na-ekpuchi mkpuchi owu na-ewepụ ewepụ na mbughari. Enwere m ohiri isi Tempur-Pedic m nwere tupu m tụrụ ime, achọrọ m ihe yiri ya maka oge nke abụọ na nke atọ, yabụ nke a zuru oke, ka mama Sarah kwuru. Inchestụ ihe dị sentimita 48 n’ogologo na sentimita iri na anọ na anọ n’obosara, pịkọ a dị n’akụkụ ka ukwuu ma ọ gaghị eweghara akwa gị dum.
3. Kachasị mma maka njem: Boppy Pregnancy Wedge
Ohiri isi a dị ntakịrị sentimita iri na anọ n’ogologo na sentimita iri na abụọ n’obosara, ọ dịkwa mma maka ịchebe otu mpaghara (na-abụkarị afọ gị ma ọ bụ azụ gị). A pụkwara iji ya mee ka ikpere gị gbasaa mgbe ị na-atụrụ ndụ n'ihe ndina ma ọ bụ maka nkasi obi ọzọ n'azụ gị mgbe ị na-anọdụ ala n'ọrụ. Kpa ka ọkara ọnwa na sloped, ya size na ibu-eme ka ọ n'ụzọ zuru okè obere. Mgbe m dị ime, enwere m ohiri isi zuru ezu na wedge a. Aga m agbanwe ọzọ n'etiti ha abụọ ma hụ na itinye nke a n'akpa m mgbe m na-ejegharị, Jennie, nne mụrụ ụmụ abụọ kwuru.
4. Best nchekwa nchekwa: Boppy Pregnancy Nkwado Ohiri Isi
Enwere m ụjọ na ohiri isi ahụ ga-adị oke maka ụkwụ ụkwụ m abụọ na ụkwụ abụọ, yabụ ejiri m ihe pekarịrị m wee hụ ya n'anya, ka mama Juliana na-ekwu. (Di ya na nkịta ya bụkwa ndị na-akwado ya.) Ohiri isi a dị ime (ọ dị sentimita 20 n'ogologo na sentimita iri na isii n'obosara) na-akwado nkwado n'úkwù gị, ụkwụ gị na mkpumkpu gị — na-ewereghị ihe ndina gị dum. Ego ego maka 100 pasent owu slipcover nke na-ewepu ma na-ehicha igwe.
5. Kachasị mma U-Shaped: PharMeDoc Full Isi Ohiri Isi
Ihe mkpuchi ohiri isi nke U iji kee gị gburugburu, na-ejide n'aka na olu gị, ubu gị, azụ gị na hips na-anọkọ. Enwere ike iji mgbatị na-ewepu ya dị ka ohiri isi nke onwe ya ma ọ bụ tinye aka na isi ahụ maka nkwado ọzọ. Nke a bụ ihe Rachel, otu nne, kwuru: N'ikpeazụ, enwere m ike iwepụ ụra. Naanị ya na-agbakụ gị ma kee gburugburu afọ ahụ buru ibu, na-akwado ebe niile na-egbu mgbu na afọ ime. Na na zippered owu ohiri isi mkpuchi bụ igwe keosusu na hypoallergenic. Nwere ike ime ka onye òtù ọlụlụ gị mara na ọ ga-efunahụ ụfọdụ akwa akwa, n'agbanyeghị: Ohiri isi a na-amụ nwa ji 53 sentimita n'ogologo, 31 sentimita asatọ n'obosara na 7 sentimita asatọ n'ịdị elu. A na-enweta ya na agba agba itoolu gụnyere acha anụnụ anụnụ, pink pink na isi awọ.
6. Kachasị Mma getlọ: Họrọ ohiri isi mgbe niile
Maka ụfọdụ ụmụ nwanyị, isi ohiri isi ejiri eyi dị mma karịa nke ọhụrụ dị mma. Akpọrọ m ohiri isi ọ bụla m tụụrụ ime asị, ka mama Dabee na-ekwu. Emechara m jiri ohiri isi na-adịkarịghị ọcha ma tinye ya n'etiti ikpere m. Hey, ihe ọ bụla na-arụ ọrụ.
7. Best Multi-Jiri afọ ime Pillow
Azụrụ m ohiri isi abụọ iji nyere m aka ihi ụra mgbe m dị ime ma ha nyere aka n'ezie, mana mgbe ahụ, amaghị m ihe m ga-eme ha ma emechaa, otu nne na-agwa anyị. Ihe ndị ahụ ejirila otutu nke oghere. Ọ bụ eziokwu-ohiri isi afọ ime nwere ike ịbụ ihe magburu onwe ya mana ozugbo nwa ahụ bịara, ha na-ejikarị ezigbo ụlọ dị oké ọnụ ahịa na elu ụlọ ma ọ bụ kọbọd. Tinye a nkọ ghota na-abịa na mmiri mmiri ma ọ bụ pink na okpukpu abụọ dị ka a ara na-elekọta ohiri isi. Ndị nne na-enwe ike iji ya maka isi, olu na azụ nkwado ma ọ bụ dị ka ihe mkpuchi dị nro iji tinye n'etiti ụkwụ. O nwekwara ike inye aka maka ụkwụ aza (ọ na-eme) site n'inyere gị aka bulie ụkwụ gị elu. Mgbe a mụsịrị nwa, pịrị ohiri isi iji kwado nwa gị mgbe ị na-enye nwa ara (na-enye ogwe aka gị ezigbo ezumike). Onye amamihe.
nke edozi isi dabara maka oval ihu
8. Best customizable afọ ohiri isi: Full Isi Ime Pillow
Know maara na iwe na-akpasu iwe ebe ọ dịghị mkpa ka ole ị na-atụgharị ma na-atụgharị n'abalị mana ị nweghị ike iru ala? N'ime ime, jiri otu narị na-amụba ihe mmetụta ahụ. Dị ka mama ọ bụla ga-agwa gị-ọkwa nke ahụ erughị ala na-eto naanị site na nkwụsị gị na-agbasawanye. Ọ bụ ya mere o nwere ike iji nye aka ịnwe ohiri isi abụọ na njikere ma ọ bụ nke enwere ike idozi ka ihe mgbu gị na-esi n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ (wee laghachi ọzọ). Enwere ike idozigharị ohiri isi a buru ibu U ka o wee nwee ike idozi ya naanị ụzọ ị masịrị ya site n'iwepụta 100 pasent hypoallergenic owu na-ejuputa n'ime mkpuchi ime iji gbanwee elu dị ka ọ dị mkpa. Inchestụ ihe dị ka sentimita 59 n’ogologo na sentimita 26 n’obosara, ihi ụra ohiri nke zuru ezu dị ka nnukwute amakụ.
Ohiri isi ime ọ na-enyere aka n’ezie?
Ọtụtụ ndị nne na nna ga-agwa gị na ịrahụ ụra nke ọma n'abalị mgbe ị dị ime abụghị ihe dị mfe, mana ụfọdụ nkwado ọzọ nwere ike inye aka.
Nke ahụ bụ n'ihi na ndị dọkịta na-adụ ụmụ nwanyị dị ime ọdụ hie ụra n’akụkụ ha n’oge ikpeazụ nke afọ ime . Ma ọ bụrụ na ị na-ehi ụra n’azụ gị ma ọ bụ afọ gị, mgbe ahụ, ohiri isi enwetara nke ọma nwere ike inyere gị aka ịnọ n’akụkụ gị (ọ bụ ezie na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-ahụrịrị na ebe ndị agadi gị na-aga ebe na-adịchaghị mma na agbanyeghị). Ohiri isi nwere ike inyekwa nkwado ọzọ maka úkwù gị, ikpere na nkwonkwo ụkwụ gị-akụkụ ndị nwere ike ịda mbà n'oge ime ime site na ibu ibu yana mgbanwe hormone.
Mana ọ dịghị mkpa ịzụta ohiri isi pụrụ iche nke afọ ime ma ọ bụrụ na ịchọghị. N'ezie, otu n'ime ihe anyị na-eme bụ ohiri isi oge niile ị nwere ike ịbanye n'etiti ikpere gị ma ọ bụ n'okpuru afọ gị. Isi isi nke ohiri isi ime bụ na ọ dị oke mma n'ihi na ọ nwere ike ịkwado akụkụ ahụ dị iche iche n'otu oge, yabụ na ị gaghị edozigharị ohiri isi ọtụtụ abalị.
Kedu mgbe I kwesiri iji ohiri isi di ime?
Ọtụtụ ndị dọkịta na-atụ aro ịrahụ n'akụkụ gị site na ọnwa atọ nke atọ iji nyere aka belata nrụgide na spain gị na iji melite mgbasa, ihe nke ohiri isi ime nwere ike inyere aka (ọ bụ ezie na ịchọrọ ịlele OB / GYN gị maka ntuziaka ndị ọzọ) . Ma ị nwere ike ịmalite ịmalite iji ohiri ime n'afọ tupu oge ahụ ma ọ bụrụ na-amasị gị, ụfọdụ ndị nne na-anọgide na-eji ohiri isi ha mgbe ha dị ime iji belata ihe mgbu ma nyere aka nweta ụra nke ọma n'abalị.
Njikọ: Wzọ iri iji nweta ezigbo ụra ụra abalị mgbe ị dị ime
ntutu daa ihe kpatara na ngwọta
esi chịkwaa ntutu ịda n'ihi dandruff
ntutu ntutu ịda n'ụlọ
ịhịa aka n'ahụ n'ụlọ
esi ejikwa oke ntutu daa